जाओ काँशी गएर बस, भारतीय कमाराहरू हो ! – Sanghiya Online
पुर्ब शामन्ती युद्ध सरदार तथा कठपुतली प्रधानमन्त्री छबिलाल दाहालले राजिनामा दिने रे ? हो र ? अबश्य होइन, यो दाहालले गराएको प्रायोजित हल्ला मात्र हो. त्यहि पद प्राप्त गर्न मोदीको पाउ चाट्ने र देश बेच्न तयार दाहालले त्यसै पद त्याग्छन !!
आफुलाई संकट आएको देख्ने बित्तीकै यस्तो हल्ला फैलाएर आफु बारेमा आफ्नो जामात भित्रको र अन्य राजनीतिक दलहरूको जनमत बुझ्न यी युद्ध सरदार धेरै सिपालु छन्. दाहालले राजिनामा दिने छैनन् भन्ने तथ्य बारेमा निश्चित भए हुन्छ.
बिगतमा बाबुराम भट्टराई दाहालको जमातमा हुँदा पनि दाहाल बेला-बखत आफ्नो जमातको अध्यछ्य पदबाट राजिनामा दिने र बाबुराम भट्टराईलाई पद सुम्पने भनेर यसैगरी प्रचार गराएर आफु बारेमा आफ्नो जमात भित्रको जनमत बुझ्ने कोशिश गर्थे. त्यसपछी, जब आफ्नो पछ्यमा जनमत बलियो देखिन्थ्यो, उनले पद त्याग्ने कुरा सेलाएर जान्थ्यो. बिचरा बाबुराम भट्टराई त्यहि जनमतलाई बिश्वाश गर्थे र चुप लागेर बस्थे.
हो, दोश्रो पटक प्रधानमन्त्री भए देखि दाहालले यस्तो प्रचार यो पटक भन्दा अघी पनि धेरै पटक गराए. यी धुर्त मनुवाको पद त्याग्ने प्रचार सुनेर अर्को भारतीय कमारा कांग्रेसी जमातको नाईके शेर बहादुर देउबा मुख मिठाएर बसिरहेका छन्. धुर्त दाहालको सामु बिचरो लठेब्रो र बुददु देउबाको केहि लाग्ने छैन. त्यसैले, अब देउबा प्रधानमन्त्री हुन् नपाईकन अर्को संसदीय निर्बाचन हुनेछ. त्यसपछी देशमा दाहाल र देउबाको औचित्य समाप्त हुन्छ. जाओ काँशी गएर बस, भारतीय कमाराहरू हो !
अब अर्को चरणको स्थानीय निर्बाचन नभएसम्म देउबा, सेउबा, लेउबा प्रधानमन्त्री हुने/बनाउने र बजेट ल्याउने काम नगर्दा हुन्छ. बजेट प्रस्तुत भएपछी तुरुन्तै प्रान्तीय निर्बाचन गराउन लाग्नु पर्छ र त्यसपछी सम्षदको निर्बाचन गराउने.